Arsenal oo heshiis cusub ka saxiixanaysa mid ka mid ah xiddigaheeda si ay uga ceshato Kooxaha Liverpool, Man Utd & Bayern Munich - Hargeele - Wararka Somali State
(Manchester) 15 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la soo warinaya inay qorsheynayso inay heshiis cusub ka saxiixato mid ka mid ah xiddigaheeda muhiimka ah si ay uga horjoogsato inuu tago.
Gunners ayaa qorsheynaysa inay wadahadallo heshiis kordhin ah la furto ciyaaryahankeeda da’da yar ee Bukayo Saka.
18-sano jirkaan ayaa bandhig wacan ka sameeyey kooxda koowaad, waxaana uu boos ka helay safka hore ee naadiga xilli ciyaareedkan, isagoo 16 kulan ku soo bilowday safka hore, halka 7 kulan oo kalena uu ka soo kacay kursiga keydka tartammada oo dhan.
Si kastaba ha noqotee, laacibkan ka soo baxay akadeemiga kooxda ayaa loo tixgelinayaa inuu yahay xiddig muhiim u ah mustaqbalka naadiga, waxay u muuqataa in Gunners ay u baahan tahay in shaqo ay qabtaan si ay da’yarkooda ugu sii hayaan garoonka Emirates.
Jariiradda The Telegraph ayaa warinaysa in Arsenal ay doonayso inay heshiis cusub u bandhigaan xiddigan, mas’uuliyiinta naadiga ayaana wali ka dhaadhicin laacibka garabka bidix inuu sii dheereysto joogitaankiisa Waqooyiga Magaalada London dhammaadka xilli ciyaareedka soo socda.
Inkastaoo wadahadalladu sii socon doonaan, haddana kooxaha sida Liverpool, Manchester United iyo Bayern Munich ayaa dhammaantood la sheegayaa inay isha ku hayaan xaaladda xiddigan, halka Arsenal ay rabto inay ka horjoogsato inuu dhaqaaqo.